Ogaden News Agency (ONA) – U.K- OGEYSIIS: Xuska Sanadguurada 29aad oo ka dhacaysa Axada Manchester, England
U.K- OGEYSIIS: Xuska Sanadguurada 29aad oo ka dhacaysa Axada Manchester, England
Posted by ONA Admin	/ August 19, 2013
Waxaa la ogeysiinaya Dhamaan Jaaliyadaha Somalida Ogadeniya ee wadanka UK, in kulan balaadhan oo lagu xusayo Munaasabada Sanad Guurada 9aad ee kasoo wareegtay Aasaaski Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya innuu ka dhici doono Magaalada Manchester ee Wadanka UK.
Taariikhda: 25 August 2013
Saacada: 5PM ilaa Habeenki
Goobta: 3 St Bride Street, Oldtraford, Manchester, UK Post Code: M16 9LM
Telefano: 079 08 495665 ama 07956 522412
Munaasabadan waxaa soo qaban qaabisay Jaaliyada Ogadeniya ee Gobalka Manchester. Waxaana lagu soo bandhigi doona taariikhda Shacabka Somalida Ogadeniya, ee mudada dheer ku hoos jirtay Gumeysiga. Halgamadi dheera ee ay usoo galeen sidii aayahooda uga tashan lahaayeen, guulaha Halganka Ogadeniya ee Dibada iyo Gudaha Ogadeniyaba laga gaadhay, Himmilooyinka la hiigsanayo.
Waxaa lagusoo bandhigi doona waxyaalo badan oo xiisogalinaya shacabka Somalida Ogadeniya iyo dhamaan dadka ehelka u ah qadiyadaas ee taagere iyo nafba u haya qadiyiya shacabka Ogadeniya.
Hadaba Saxiibayaal ha mooganina munaasabada Qaaliga ah.
Halgame Abshir oo kamid ah Maamulka Ururka Dhalinyarada OYSU Jaaliyada Greater Manchester ayaa ONA u sheegay in xafladan si heersare ah loo aggaasimayo qaban qaabdeeduna socotay mudooyinkanba. Ururka Haweenka Greater Manchester ayaa dhinacooda wada abaabul dhanka bulshada la xidhiidha iyada oo Ururka dhalinyaraduna dhinacooda ay kawadaan Barnaamijyo ay maalinkaas soo bandhigi doonaan.
Magaalada London Ayaa sidoo kale 17 August 2013 lagu qabtay munaasabad tan lamid ah oo ay kasoo qeyb galeen khadka teleefanka Xubno badan oo kusugan Geeska Afika oo uu kamid yahay Abwaan Heelaale iyo Cabdikariim sheekh Muuse. Waxaa laga daawan doona musanadan Ilaystv.
Jaaliyadaha Ogadeniya ee UK ayaa xafladan balaadhan isugu imaan doona, iyada oo loogu baaqayo damaan shacabweynaha ku sugan Agagaarka Greater Mancheter inay xafladan kasoo qeyb galaan.